ko nyo၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
ko nyo's Apps
ko nyo's Likes
Ko nyo's ၏မိတ်ဆွေများ
ko nyo's Groups
ko nyo's Discussions
လောဘမှုစိတ် ၈ ပါးကိုတင်ပြပြီးဖြစ်ရ်ျ ကျန်ဒေါသမှုစိတ် ၂ပါး၊မောဟမှုစိတ်၂ပါးစ
Started this discussion. Last reply by နီစံ (အနီ) မေ 2, 2012. 1 Reply0Likes
လောဘမှုစိတ် ၈ ပါးကိုတင်ပြပြီးဖြစ်ရ်ျ ကျန်ဒေါသမှုစိတ် ၂ပါး၊မောဟမှုစိတ်၂ပါးကိုထပ်မံတင်ပြလိုက်ပါသည်။ဒေါသမှုစိတ်(ဒေါသမှုလဖြစ်သောစိတ်) -၂ပါး ၁။ ဒေါမနဿသဟဂုတ် ပဋိဃသမ္ပယုတ် အသင်္ခါရိက စိတ်-၁၊…ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
ရဟန္တာ တို့၏ ကြိယာစိတ် အကြောင်းသိချင်လို့ပါ
Started this discussion. Last reply by ko nyo Apr 24, 2012.3Replies0Likes
ရဟန္တာတို့၏ ပြုလုပ်သမျှသောကံတို့သည် နောင်တဖန်အကျိုးမပေးသော ပြုကာမျှဖြစ်သော ကြိယာစိတ် အကြောင်းကို သိလိုပါသည် မည်သည့်စိတ် စေတသိတ်များ ယှဉ်သည်များကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ နားလည်သူများရှိလျှင် သိလိုပါသည်…ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
Started this discussion. Last reply by ဦးကောသလ္လ မေ 18, 2012. 19 Replies0Likes
အမှားပါရင်ခွှင့်လွတ်ပါ ပထမအကြိမ်ပါ စိတ်ထဲမှာ မတင်မကျဖြစ်နေတာကို ဒီနေရာလေးမှာ မေးရင်းနဲ့အဖြေရနိင်တယ်ထင်လို့ပါ ကမ္ဘာမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ အကောင်းဆုံးပါလို့ ဘာသာကြီးတွေအားလုံးက လက်ခံထားရဲ့နဲ့ ဗမာပြည်လူဦးရေ…ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
ko nyo သည်လက်ဆောင်မရရှိသေးပါ။
Ko nyo's Blog
ဒီဘလော့ကို အောက်တိုဘာ 30, 2012 တွင်4:30pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment 1 Like
အဘိဓမ္မာ အခါတော်နေ့တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့အတွက် သိသင့်သော အကုသိုလ် ၁၀ပါးကို ကုသိုလ်ပြုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်
၁- ပါဏာတိပါတာ သတ္တဝါတို့ကိုသေစေလိုသော စေတနာဖြင့် သတ်ဖြတ်မှု့
၂- အဒိန်နဒါန သူတပါးပစ္စည်း ဥစ္စာကို ခိုးဝှက်တိုက်ခိုက် လိမ်ညားလှည့်ပတ် ယူမှု့
၃- ကာမေသုမိစ္ဆာစာရ သူတပါး သားမယားဖျက်ဆီးမှု့
၄- မုသာဝါဒ မဟုတ်မမှန် လိမ်လည်ပြောဆိုမှု့
၅- ပိသုဏဝါစာ ဂုန်းချော ကုန်းတိုက်သော…
အပါယ်၎ဘုံကို သာမန်လူတွေရဲ့အမြဲနေအိမ်လို့ ဘာကြောင့် ဘုရားဟောခဲ့တာလဲ
ဒီဘလော့ကို မေ 5, 2012 တွင်2:56pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။2Comments0Likes
ဆရာတော် ဓမ္မဓူတအရှင်ဆေကိန္ဒ၏ လက်တွေ့အသုံးချ အဘိဓမ္မာတရားခွေမှတဆင့်ပြန်လည်တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အဘိဓမ္မာ တရားတော်သည်သုတ်၊ဝိနည်းတို့ထက် များပြားကျယ်ပြန့်သည့်အလျှောက် အဓိပ္ပါယ်တခုကို သဘောပေါက်အောင်ရှင်းပြနိင်ရန် များစွာအခက်အခဲရှိပါသည်၊သို့သော် သင်ယူလျှင် နားလည်တတ်မြောက်ပါသည်၊သင်ယူရန် အချိန်အခက်အခဲရှိသူများနှင့်အဘိဓမ္မာဆိုတာဘာလဲဆိုတာ မသိသေးသူများအတွက် မိတ်ဆက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်၊တတ်ကျွမ်းနားလည်လွန်းရ်ျ မဟုတ်ပါလေ့လာရင်းပြန်လည်ရေးသားခြင်းဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါသည်။
ဒီဘလော့ကှိုဧပြီ 30, 2012 တွင်12:26am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။3Comments0Likes
၃။မောဟမှုစိတ် (မောဟမှုလ အရင်းခံဖြစ်ရသောစိတ်) -၂ပါး…
5:55pm အချိန်ှဧပြီ 2, 2015, တွင် phyuthi မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
12:40pm အချိန်သြဂုတ် 24, 2013, တွင် ကိုကျော်သန်း မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
6:23pm အချိန်ှဧပြီ 2, 2012, တွင် နီစံ (အနီ) မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
6:59pm အချိန်မတ် 9, 2012, တွင် ♣တောသူမလေး♣ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
အစ်ကိုကျန်းမာချမ်းသာပါစေ ညီမလေး တောသူ
12:17am အချိန်မတ် 4, 2012, တွင် နီစံ (အနီ) မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
3:07pm အချိန်မတ် 3, 2012, တွင် ♣တောသူမလေး♣ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
အစ်ကိုရေ မင်္ဂလာပါ ညီမလေးလာကြိုပါတယ်
အစ်ကိုပို့ပေးတဲ့ ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာစာအုပ်လေးနဲ့ စီဒီခွေကိုဒီနေ့ပဲရတယ်အစ်ကို
စာအုပ်က အတော်လေးစုံတာမို့ ၀မ်းသာပီတိဖြစ်နေရပါတယ်အစ်ကို
အခုလို ညီမလေးကို တရားဓမ္မအလှူဒါနပြုရသောအကျိုးကြောင့်
မင်္ဂလာအပေါင်းနှင့် ပြည့်စုံသောနေ့လေးမှသည် မနက်ဖြန်တွေတိုင်းမှာ
စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်၏ ကျန်းမာခြင်းနှင်ပြည့်စုံလို့
မိမိဖြစ်ချင်သော ဘ၀နှင့်ဆန္ဒ ထပ်တူကြလို့
သာသနာအကျိုး ဆထက်တပိုးသယ်ပိုးနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ရှင်။